အောကျတိုဘာ 2018 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း) မေး. ကလေးတွေရဲ့ အရေပြားမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးတွေကူးစက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ကလေးလေးတွေမှာ အရေပြားပွန်းရှတာ၊ ကုတ်ဖဲ့တာ . . ဒီလိုနည်းတွေကတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးက ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးက ၀င်သွားပြီးတော့ ကလေးတွေမှာ...
ကိုရီးယားအသားချောင်းကို ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် စားတတ်ဖို့ဆိုရင် . . .
မေး. ဆိုင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ ကိုရီးယားအသားချောင်းတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါသလား။ စားချင်ရင် ဘယ်လောက်အထိစားသင့်ပါသလဲ။ Ni Ni (FB) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကိုရီးယားအသားချောင်းတွေမှာ အာဟာရတန်ဖိုးမရှိသလောက်ပါပဲ။ အသားတွေကိုကြိတ်ပြီး ဆန်မှုန့်တွေ၊ ဘာတွေနဲ့ ရောထားတဲ့အတွက် ကယ်လိုရီက...
သင့်သွေးထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောအဆီတွေ မြင့်တက်နေပါသလား
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အဆီမှာ ကောင်းတဲ့အဆီနဲ့ မကောင်းတဲ့ အဆီဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိကာ အခန်းအပူချိန်မှာ အရည်ဖြစ်တဲ့ အဆီတွေကို မပြည့်ဝဆီလို့ခေါ်ပြီး မပြည့်ဝ ဆီမှာ သံလွင်ဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပုပ်စေ့ဆီ စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အဆီ(ပြည့်ဝဆီ)တွေကို တိရစ္ဆာန်ထွက်...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်စောဦး (အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး ဆေးပညာဌာန မြောက်ဥက္ကလာပသင်ကြားရေး ဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်ပွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ အရိုးကျီးပေါင်းအကြောင်းကို မြောက်ဥက္ကလာပသင် ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆေးပညာဌာနမှ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်စောဦးအား အခုလိုပဲ မေးမြန်းထားပါတယ်။ မေး။...
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမိသားစုက ၂၀ ယောက်မြောက် ကလေးကိုမွေးဖွားပြီးနောက် နောက်ကလေးယူရန် အစီအစဉ်မရှိတော့ဟုဆို
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမိသားစုဖြစ်တဲ့ ရက်ဒ်ဖို့စ်မိသားစုက ကိုယ်အလေးချိန် ၈ ပေါင် ၆ အောင်စရှိတဲ့ ၂၀ ယောက်မြောက်ကလေးကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး နောက်နောက်ထပ်ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိတော့ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၄၆နှစ်အရွယ် နိုရယ်နဲ့ အသက် ၄၂နှစ်...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတိုင်း ဘ၀မှာ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်ဆိုသလို ၀မ်းချုပ်တာနဲ့ အူလှုပ်ရှားမှုမကောင်းတာတို့ကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အူလှုပ်ရှားမှု မကောင်းဘဲ ၀မ်းချုပ်တဲ့အခါ မာကျောတဲ့ ၀မ်းတွေသွားတာကြောင့် နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ အူလှုပ်ရှားမှုကောင်းပြီး ၀မ်းမှန်မှန်သွားစေဖို့ အောက်ပါနည်း လမ်းတွေကို...
သားဥပြွန်မှာ ရေအိတ်တည်ရင် ဘယ်လို ကုရမလဲ
မေး။ ။ သားဥပြွန်ထဲမှာရေအိတ် 4cm နဲ့ 3cm ၂ လုံး ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၇ လရှိပါပြီ။ တားဆေးဘာမှမသုံးပါ။ ကလေးလည်း မရပါဘူး။ အူအတက်ရောင်လို့ ဆေးခန်းပြရာက ရေအိတ်ရှိမှန်းသိတာပါ။ ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲ အကြံလေး ပေးပေးပါရှင်။ Mai...
လူအများသိလိုသော အသည်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ (၃)
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်-ငြိမ်း) ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မွေးမွေးပြီးချင်း ကလေးကို ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ၃ကြိမ်ထိုးပေးထားပါတယ်။ အဲဒီကလေးတွေက အသက်ဘယ်အရွယ်မှာ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ပြန်ထိုးရပါမလဲ။ Htoo Khant Mg (FB) ဖြေ. တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို သုံးကြိမ်ထိုးပြီးသွားတဲ့အခါ...
အောကျတိုဘာ လ၊ 2018 ခုနှဈ